16-Shaqsi Oo Bollywood-ka Ka Tirsan Kuwaas Oo Hal Meel Kula Noolaa Lamaane Aysan Guursanin Qaybta 1-aad (+Sawiro) - Hablaha Media Network
16-Shaqsi Oo Bollywood-ka Ka Tirsan Kuwaas Oo Hal Meel Kula Noolaa Lamaane Aysan Guursanin Qaybta 1-aad (+Sawiro)
HMN:- Waxaan idiin heynaa warbixin ku aadan 16-shaqsi oo Bollywood-ka ka tirsan kuwaas oo la noolaa ayagoo guursanin lamaane xiriir jaceyl kala dhaxeeyay.
Lamaanayaashaan waxay go’aansadeen inay wada noolaadaan ayagoon si sharci ah isku guursanin sidoo kalena wada dhaqmaan ayadoo wax walbo la wada wadaagayo (Live-In Relationships).
Fadlan hoos kaga bogo qaybta kowaad 16-ka shaqsi ee hada ka hor lamaane la noolaa balse aan si sharci ah isku guursanin:
Pulkit Samrat & Yami Gautam: Waxaa la sheegay in labadaa jila markii ay filimo badan isla jileen inay iska heleen, sidoo kalena Pulkit xaaskiisa waxay ku kala tageen arimo la xariiro in Yami Gautam uu xiriir la leeyahay.
Balse dhawaan waxaa la sheegay in xaafada Goregaon hal guri ka wada dagan yihiin sidoo kalena nolol is fahan ah ka dhaxeyso laakiin lama ogo inay is guursan doonaan inkastoo haatan wax walbo wadaagaan.
John Abraham & Bipasha Basu: Labadaan jilaa ku dhawaad 10-sano ayay saaxiibo ahaayeen sidoo kalena 5-sano oo ka mid ah hal meel ayay wada dagnaayeen waxayna u dhaqmi jireen lamaane is qabaan.
Laakiin wada noolaan shahoodii sanadii 2010 ayay soo idlaatay qof walbana hortiisa ayuu raacay waana la kala guuray.
John haatan waa xaasle sidoo kalena Bipasha bilawgii sanadkaan ayay guursatay atooraha Karan Singh Grover oo horey labo gabdhood usoo furay.
Sushant Singh Rajput & Ankita Lokhande: labadaan jilaa ee TV-yada kusoo wada caan baxeen dhalinta ayay iska dhex doorteen waxayna noqdeen lamaane wax walbo wadaagaan sidoo kalena hal guri wada dagaan.
Sushant iyo Antika noloshodii ma ahan mid qarsoon waana la wada ogaa inay wada nool yihiin xiriir adagna ka dhaxeeyo.
Balse wax walbo hadii aan magac loo yeelin sharcigana la horgeynin ma waaraan waana sababta keentay inay kala haraan haatana Sushant waxaa lagu xantaa inay saaxiibo yihiin atirishada Kriti Sanon.
Boney Kapoor & Sridevi: Waxaa la sheegay in sanado badan Boney Kapoor qarin jiray xiriirkii kala dhaxeeyay Sridevi oo guri u joogi jirtay asigoo xaasle ah.
Markii dambe Sridevi uur ayay yeelatay sheekadana waa la qarin waayay sida darteed Boney xaaskiisii kowaad ayuu furay wuxuuna soo xero gashtay sanadii 1995 Sridevi oo haatan la nool labo gabdhoodna u dhashay.
La Soco Qaybta Labaad Shaqsiyaadka Bollywood-ka Ka Tirsan Ee Caanka Ah Kuwooda Nolol Aan Guur Ku Saleesneyn Lamaane La Wadaageen